Study in THAILAND | Crown Education
Search Update News
Scotland ရဲ့ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တွေထဲကမြန်မာကျောင်းသားများ ကြား ရေပန်းစားတဲ့ University of Glasgow (ရန်ကုန် - မတ်လ ၂၅) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ BHMS ကျောင်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဖြင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်ကိုပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရယူ ပြီးသင်ယူလိုပါသလား (မန္တလေး - မတ်လ ၁၈) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ “ဘွဲ့ တစ်ခုခုရထားပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိသူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်အကိုင်/ပညာရေးလမ်းအကြောင်းများ” (ရန်ကုန်- မတ်လ ၁၆) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Facebook
HomeCrownAbout UsCROWN’S AWARDSStudent TestimonialsServicesUniversitiesStudy in HOLLANDStudy in MALAYSIAStudy in AUSTRALIAPre MASTERSStudy in UKStudy in USAStudy in SingaporeStudy in NEW ZEALANDGUIDE TO UK UNIVERSITIESStudy in THAILANDUseful InfoUnaccredited InstitutionsPathway ProgramsGlobal Assessment CertificateNCUK International Year OneGAC Pathway UniversitiesGAC in MyanmarNewsGalleryPhoto GalleryContact UsEDU EXHIBITION 2017FAQs Study in THAILAND
မြန်မာနို်င်ငံနှင့်အနီးဆုံး Thailand တွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်း သားများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိရာ၊ CROWN Education မှတဆင့်အောက်ပါ တက္ကသိုလ်များ သို့လျောက် ထားနိုင်ပြီး၊ 12 တန်းပညာရေး မပြည့်မှီသူများအတွက် CROWN Education ၏ American College Program တွင် Foundation ပရိုဂရမ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်၊၊
Rangsit University Bangkok University
CROWN EDUCATION CONSULTING OFFICE
No. 270, 1st Floor, Room 1-B, Pyay Road, Myaynigone,
Tel:(95-9) 732 732 77
You are hereHome » Universities Back to Top
© Copyright 2014 by Crown Education. All Rights Reserved.
Designed and developed by Header Media & Advertising Agency.